Sida loogu soo dhoofiyo sawirrada iPhone-ga wadid adag oo dibadda ah adoo isticmaalaya Mac | Wararka IPhone
Ma waxaad tahay mid ka mid ah kuwa aan marna badbaadin raad raac ah sawiradaada? Ha u adeegsan adeegyada sida Sawirrada Google ama iswaafajinta iCloud? Ma rabtaa inaad haysato dhammaan sawirada wadida adag ee dibadda? Hagaag, dhowr talaabo oo fudud - iyo daqiiqado yar— waxaad haysan doontaa nuqul dhamaan sawiradaada oo kujiro disk banaanka ah adoo adeegsanaya mid ka mid ah codsiyada la imanaya heerkaaga kombuyuutarkaaga Mac.
Caadi ahaan, illaa aad ka joojiso kicinta tooska ah, Markaad ku xirto iPhone-kaaga ama iPad-kaaga kumbuyuutarkaaga Mac-ga ah, iPhoto ayaa si toos ah u furaya. Haddii aad rabto inaad u dhoofiso dhammaan sawiradaada kumbuyuutarkaaga gudaha adag, horay u soco oo guji soo dejinta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto maktabaddaada sawirka in lagu martigaliyo disk banaanka ah, waa inaad isticmaashaa arjiga "Sawirka Sawirka" (waxaad ka heli kartaa galka codsiyada ama Launchpad).
Kahor intaadan sii wadin waxaan kuu sheegi doonaa in shaqadani ay u adeegi doonto labadiinuba ku wareeji sawirada disk adag sida xasuusta USB, diskka gudaha ee gudaha ee Mac, iwm. Laakiin aan bilowno:
Ku xir iPhone si dekedda USB ee Mac ah
Waxaad arki doontaa in IPhone-ka uu ka muuqdo Barbaarta Sawirka Sawirka isla markaana si toos ah dhamaan sawirada aad ku keydisay xusuusta kumbuyuutarka ayaa ka muuqda shaashada. Xusuusnow taas Labada sawir iyo shaashadda ayaa soo muuqan doona iyo sidoo kale sawirro aad ka heshay WhatsApp, iwm..
Qeybta hoose ee Sawirka Sawirka waxay muujineysaa tirada sawirrada aad ku haysato aaladda iyo halka laga soo dejinayo
Dhagsii sanduuqa loo socdo oo raadi "Kuwa kale ...". Waa halkan halkaas oo aad ka dooran karto darawalka adag ee aad rabto inaad isticmaasho iyo haddii aad rabto inaad ku soo dejiso dhammaan sawirada galka gaarka ah
Marka la doorto halka loo socdo, waa inaad kaliya doorataa dhagsii badhanka «Soo Deji» oo daqiiqado gudahood waxaad heleysaa nuqul nuqul ah sawiradaada waxaadna awood u yeelan doontaa inaad ka masaxdo xusuusta gudaha ee iPhone ama iPad
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida Loogu Soo Dejiyo Sawirrada iPhone-ka Loogu Wareejiyo Hard Drive-ka Dibadda Adoo Isticmaalaya Mac
Waxaad fureysaa App-ka Sawirada, iPhone-ka wuxuu ka muuqanayaa dhanka bidix waxaadna ka arki kartaa sawirada iPhone-ka, nuqul ama dhoofin
Iyo qaabkan taariikhda abuurka sawirka waa la keydiyay?
Sababtoo ah ka dhoofinta sawirada had iyo jeer lama xafidayo
Wanaagsan, waan raadinayay tanina waa tan ugufiican, maan ogayn in sidan ay jirto. Wax walbo wey hagaagsanaayeen oo wey kaydsadeen 5000 sawir.
Ka jawaab isticmaale 1
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la diro kuwa 5 oo sawir ah? Waan ku jiraa waana maalin ka badan nus maalin
Aad baad u mahadsantahay !! Ugu dambeyntii hab fudud
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka sawirada, waa inaan u wareejiyaa kumbuyuutarka ka dibna diskiga adag ... inaan haysto 12000 oo sawir waxay ahayd hawl aan macquul ahayn.
Qaabkan hal guji mar hore ayaa la xaliyay.
Ku jawaab vivi
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la diro kuwa 12 oo sawir ah? Waan ku jiraa waana maalin ka badan nus maalin
Waxaan isku dayaa sidan oo kale iyo barnaamijka qabashada muuqaalka waxaan ku arkaa Unblock on the iPhone, mana sii wadi karo .. Ma midkiinbaa ku dhacay?
Ku jawaab Esperanza
Tilmaam aad u fiican! Si dhakhso leh oo fudud. Wanaagsan tahay dib u soo celinta ilaa darawallada adag ee dibadda. Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Mac Photos', ma aanan awoodin maxaa yeelay waxay si toos ah ugu soo dejisay kumbuyuutarka oo waxay yiraahdeen waxay u baahan yihiin meel bannaan.
Waxaan isweydiinayay sida loo sameeyo mudo dheer. Aad baad ugu mahadsantahay faahfaahinta! Gabi ahaanba way ii adeegtay
Aniga iima shaqeyso aniga, waxaan dhigaa kuwa kale iyo darawalkayga qalaad ee dibadda laakiin wuxuu u diraa kombiyuutarka
Aad baad u mahadsantahay! Marna igama shaqeysaneyn Sawirada midna waxaan ka sameeyay Windows (maheysto marin caadi ah oo aan helo) ama waxaay kudhacday mobile-kayga already Waxaan horey uhelay 18.000 oo sawir! Aad u faa'iido badan.
Marka hore, aad baad ugu mahadsan tihiin caarada, kiiskeyga waa waxtar badan maadaama in kastoo aan la joogay Mac iyo Iphone in ka badan 10 sano, mowduuca sawirada wali wuu iga soo horjeedaa :) Waa inay ka dhigaan mid dareen badan leh, fikradeyda!
Markaan taleefanka ku xiro waxay ii sheegtaa inaan haysto 1900 Shey markaan runti haysto 6000, qofna ma garanayaa sababta ????
Ku jawaab Yoa
Waad salaaman tihiin, aad baad ugu mahadsan tihiin howsha aad qabateen. Muddo dheer waxaan raadinayay sida ugu fudud ee loo sameeyo wareejintan waxayna umuuqatay wax aan macquul aheyn. Hadda waan keydin karaa booska taleefankayga aniga oo aan marin sawirrada APP ee ku jira mac-keyga.
Waan ku jeclahay, mahadsanid
Shiinaha wuxuu hagaajiyaa nidaamka canshuuraha si loo fududeeyo maalgashiga shirkadaha sida Apple
Saurik wuxuu xaqiijinayaa inay jiri doonaan ilaa seddex qalab oo lagu xiro iOS 11